Ryan Salazar မှ #NABShow LIVE အတွက်ဒုတိယနှစ်အစီရင်ခံစာကို Field Year Report အဖြစ်ကြေငြာခြင်း | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2014 NAB ပြရန် » ရိုင်ယန် Salazar အားဖြင့်တိုက်ရိုက် #NABShow များအတွက် FIELD တွင်သတင်းထောက်အဖြစ်ဒုတိယနှစ်တွင်ကြေညာ
ရိုင်ယန် Salazar အားဖြင့်တိုက်ရိုက် #NABShow များအတွက် FIELD တွင်သတင်းထောက်အဖြစ်ဒုတိယနှစ်တွင်ကြေညာ
, သင်အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းစတူဒီယိုစက်မှုလုပ်ငန်းသတင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်ထဲမှာအကြွင်းမဲ့အာဏာအကောင်းဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်ယူလာရန်ကျူးလွန် - www.broadcastbeat.com - ရိုင်ယန် Salazar တည်ခင်းဧည်ထားပြီးဒုတိယအကြိမ်ကြေညာတာဖြစ်ပါတယ် NAB ပြရန် အဆိုပါ 2014 စဉ်အတွင်း LIVE NAB ပြရန်.
ft ။ Lauderdale, FL (GCOMM) ဧပြီ 6, 2014 - "အသံလွှင့်မဂ္ဂဇင်း Beat" ပေါ်တွင်လယ်သတင်းထောက်အဖြစ်, ကိုယ်ပိုင်တည်ထောင်သူ, ရိုင်ယန် Salazar ရှိခြင်းအားဖြင့်ယှဉ်ပြိုင်ထိပ်ဆုံးဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ် NAB ပြရန် LIVE! အဆိုပါ 2014 မှာဒုတိယအကြိမ် NAB ပြရန်။ ကြည့်ရှုပါ: www.broadcastbeat.com.
သငျသညျမှတ်မိပါလိမ့်မယ်ဆိုပါကပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကမိမိတီဗီသင်္ဘောသား, NAB တိုက်ရိုက် 2013 ၏ယဉ်ကျေးခဲ့လျှင်, သူရင်ဆိုင်ရ-to-မျက်နှာတစ်ဦးငါးမန်းတို့နှင့်အတူကြွ။ (- ထိုငါးမန်း Tank ၏ NAB ရဲ့ဗားရှင်း - တစ်ဆယ်ကံကောင်းစျေးကွက်-အဆင်သင့် startup ကုမ္ပဏီများသည်မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးအတွက်သူတို့အားတိုက်ရိုက်သူတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုကိုတင်ပြရန်အခွင့်အလမ်းပေးသောဗီဒီယိုမှာအဆိုပါငါးမန်းရှိ SPROCKIT မြှင့်တင်ခဲ့ပါတယ်) ။ SPROCKIT ရဲ့နောက်ကျောကိုယခုနှစ် - ထိုငါးမန်းအကြောင်းကိုသေချာမသိ။ အဘယ်သူမျှသူနေဆဲ "ငါးမန်း။ " မပြောတတ်ပါဘူး
သူသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ် GREAT ကြည့်ရှုလျက်, သူဒီနည်းကိုတစ်နှစ်တစ်ထပ်အဘို့အသွား! သငျသညျအပေါ်သူ၏ပွဲလွဲချော်ခဲ့လျှင် NAB ပြရန် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထဲကနေ LIVE, ဒီမှာကသူတို့ကိုရန်လင့်များနေသောခေါင်းစဉ်:
ထုတ်လွှင့်မဂ္ဂဇင်းဝက်ဘ်ဆိုက်အပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအဘို့အညှိနေစတူဒီယိုစက်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ်အပျက်နှင့် ပတ်သက်. အသိပေးလူတွေစောင့်ရှောက်ရန်အပ်နှံသည် Beat ။
2014 NAB ပြရန် 2014 NAB ပြရန် 2014 NAB ပြရန်, NAB ပြရန် 2014 အသံလွှင်း ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း LIVE NABShow! ဒုတိယအချက်မှာအချိန်များအတွက်ရိုင်ယန် Salazar Host က ငါးမန်း sprockit 2014-04-06
ယခင်: Fraunhofer IIS က၎င်း၏ 3D တီဗီအသံစနစ်အပေါ်နယူး Interactive မှအကြောင်းအရာ Features
နောက်တစ်ခု: 2014 NAB: JVC အစုရှယ်ယာ 4K အစီအစဉ်များ, ENG တိုက်ရိုက် HD ကိုလွှတိုးချဲ့